Famokarana herinaratra: mila hamafisina ny tontolo iainana ao Behenjy | NewsMada
Famokarana herinaratra: mila hamafisina ny tontolo iainana ao Behenjy
Hamokatra herinaratra vaovao avy amin’ny rano ny ao Amboasary Behenjy, faritra Vakinankaratra. 2 Mw ny vokarin’ny Hydromado hozarain’nty Jirama ao Behenjy. Ny vokatra ambonin’izay hampidirina amin’ny tambajotra ifandraisana amin’Antananarivo, Tetikasa efa natomboka novolavolaina tamin’ny Politika vaovao momba ny herinaratra (NPE) 2015-2030, tafiditra ao anatin’ny laminasam-pirenena ho an’ny fampandrosoana (PND) 2015-2019. Manohana ny tetikasa Vondrona eoropeanina.
Tokony ho efa vita tanteraka tamin’ny 2018 io famokarana herinaratra ao Amboasary Behenjy io, fa noho ny antony maro ny nahatratra aoriana izany. Teo ny fiovan’ny fitondram-panjakana, fa teo koa tamin’ny 2020 ny fisian’ny valanaretina Covid-19, raha ny filazan’ireo teknisianina sasany ao amin’ny Hydromado. Amin’izao voalohany izao, 2 Mw ny vokarina ao aminy, mbola anatin’ny dingana andrana ; hampitomboana miandalana izany ho tonga 4 Mw, rehefa mandeha tsara
4 Mw na 4000 Kw, afaka mamatsy fianakaviana mihoatra ny 4000, mandany 1 Kw raha amin’ny ankapobeny. Hamafisina ny fiarovana ny tontolo iainana, hamatsy rano ny manodidina ho an’ny tohodrano. Tsy misy dikany ny tetikasa raha tsy voaro ny tontolo iainana, afantoka amin’ny fambolen-kazo.
Tsiahivina fa ny rano eto amintsika ahafahana mamokatra herinaratra 7 800 Mw, saingy tsy misy afa-tsy 160 Mw monja hatramin’izao, izay mety efa mihena noho ny faharavan’ny ala. Mbola hafa ny angovo avy amin’ny masoandro sy ny rivotra. Amin’izany rehetra izany, 15 % monja ny Malagasy no voavatsy herinaratra, 5 % any amin’ny tontolo ambanivohitra.